Umshini Wokufaka I-Briquetting Kanye Nomkhiqizi We-Crusher | I-ZYmining
Umshini Wokugcwalisa Onomfutho Ophakeme Kakhulu
Umshini Wokufaka Umfutho Ophakeme
Umshini WeBriquette Wengcindezi Emaphakathi
Ukuhlola umshini we-briquette
Metal briquetting umshini
Amaroli Okugaya Okucindezela Kakhulu
I-Single Tooth-Roller Crusher
I-Double Teeth-Roller Crusher
Ukuhlola Okuthayiphe I-Double Teeth-Roller Crusher
I-Four Teeth-Roller Crusher
I-Double Plain-Roller Crusher
I-Four Roller Crusher
I-Reversible Impact Hammer Crusher
I-Ring Hammer Crusher
I-Vertical Shaft Hammer Crusher
I-Vertical Compound Crusher
I-Horizontal Strong Continuous Mixer
I-Metallurgical Industry Materials Briquetting
(DRI) Umshini Wokufaka I-Iron Briquetting oqondile
(V2O3) I-Vanadium Trioxide Briquetting
I-Aluminium Scrap Briquetting
I-Chromium Ore Powder Briquetting
I-Furnace Burden Briquetting
I-Iron Powder Briquetting
I-Laterite Nickel Ore Briquetting
I-Metal Scraps Briquetting
I-Metallurgical Waste Briquetting
I-Settled Dust Briquetting
I-Chemical Industry Materials Briquetting
I-Aluminium Carbonate Briquetting
I-Calcium Carbide Briquetting
I-Fluorite Powder Briquetting
I-Magnesium Chloride Briquetting
I-Sodium Chloride Briquetting
I-Briquetting Yezimboni zamalahle
I-Coal Ash Briquetting
I-Briquette Briquetting yamalahle
Kwakha i-Coke Briquetting
umshini we-peat briquetting
I-Aluminium oxide Briquetting
I-Calcium oxide Briquetting
I-Magnesium Aluminium Spinel Briquetting
（MgO) I-Magnesium oxide Briquetting
Umenzeli Osemthethweni we-ZY MINING eRussia.
Sicela ungene lapha.
Njengemishini eyinhloko yezimayini, imishini ye-crusher isetshenziselwa ikakhulukazi ukuchoboza amatshe osayizi abahlukene. Imishini ye-crusher ikakhulukazi ihlanganisa i-high-pressure roller crusher, i-compound crusher, i-grade-double-tooth crusher, i-gaw crusher, kanye ne-double-tooth roller crusher. I-Roll crusher njll.
Izinzuzo Zabakhiqizi Bemishini Yokufaka I-Briquetting
Ngemva kwenkonzo yokuthengisa
Isiqinisekiso sokuhlinzeka abasebenzisi ngesevisi enhle yokuthengisa ngaphambilini nangemuva kokuthengisa, ukwethula ukusebenza komkhiqizo nezimfuneko zokusebenzisa ngaphambi kwe-oda, ukunikeza ulwazi olufanele, futhi ube umsebenzisi omuhle.
Umkhiqizo ngempela uyinkinga yekhwalithi yomkhiqizo phakathi nenkathi “yeziqinisekiso ezintathu”, futhi ugcwalisa ngokuqinile isibopho sesinxephezelo njengoba kushiwo kunkontileka.
Ngemva kokuthola isicelo somsebenzisi sokuxazulula isaziso senkinga yomkhiqizo osetshenziswayo, inkampani yenza impendulo yokuqala phakathi nehora elingu-1.
Ukuqeqeshwa kobuchwepheshe kwezidingo zabasebenzisi, ukulandelela ikhwalithi nokufinyelela komsebenzisi kubasebenzisi ababalulekile, ukuthuthukiswa okufika ngesikhathi kokusebenza komkhiqizo ngokwezidingo zabasebenzisi, kanye nokuthuthukiswa okuqhubekayo kwekhwalithi yomkhiqizo.
Izesekeli nezinto ezisetshenziswayo zomkhiqizo zinikezwa ngentengo yangaphambili yemboni.
Uma udinga izinsizakalo zobuchwepheshe, sizothumela izisebenzi ezichwepheshile nezobuchwepheshe ukuze zibambe iqhaza ekwamukelweni kokukhipha impahla futhi ziqondise umsebenzi wokufaka.
Imishini yokufaka i-briquetting, ukuchotshozwa, ukuxuba, ukuthutha, usimende, amalahle, isihlabathi esenziwe ngomshini
, nezinye izitshalo eziphelele zenziwa ngokuyinhloko.
I-Luoyang Zhongyuan Mining Machine Manufacture Co., Ltd. itholakala eLuoxin Industrial Zone, eLuoyang City, okuyinhloko-dolobha yombuso wenkulungwane yeminyaka kanye nedolobha le-peony, elimboza ngama-30000 ㎡. Zuza ekuphumeni kwe-Jianxi kuthelawayeka webhande eliseNingizimu ntshonalanga eduze nomgwaqo kazwelonke ongu-No.310, ukuhamba kwawo kulula kakhulu. Imishini yokufaka i-briquetting, ukuchoboza, ukuxuba, ukudlulisa, usimende, amalahle, isihlabathi esenziwe ngomshini, nezinye izitshalo eziphelele zenziwa ikakhulukazi, ezingasetshenziswa kabanzi kwezokusansimbi, imayini, izinto zokwakha, amakhemikhali, amalahle, amandla kanye nokulahlwa kukadoti wasemadolobheni. izimboni futhi idayiselwa ezimakethe zasekhaya nakwamanye amazwe eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, i-Europe, i-Afrika, i-Asia nezinye izindawo, yaphasisa i-ISO9001:2008 uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe ngamazwe kanye nesitifiketi se-CE se-EU, futhi bathola idumela eliphezulu.
Link to: Company Capacity
Indawo Yokusebenzisa I-Compound Crusher
Indawo Yokusebenzisa Umshini Webhola Lomfutho Ophakeme
Isetshenziswa kakhulu kumalahle, izimayini, i-metallurgy, izinto eziphikisayo, izinto zokwakha kanye nezinye izimboni zensimbi elula.
Isayithi lokusebenzisa i-Roller Crusher elinamazinyo amane
I-High-pressure Roller Mill Use Site
Imaphi amaphutha ajwayelekile nezisombululo zama-crusher nomthelela?
I-Impact crusher ingumshini wokuchoboza osebenzisa amandla anomthelela ukuchoboza izinto. Ingakwazi ukuphatha izinto ezinobude obuhlangothini be-100-500 mm noma ngaphansi, ngamandla okucindezela afika ku-350 MPa, ngesilinganiso esikhulu sokuchoboza, futhi izinto ezichotshoziwe ziyizinhlayiya ze-cubic. Isetshenziswa kakhulu ezintweni zokwakha, ukuchotshozwa kwe-ore, izitimela, imigwaqo emikhulu, amandla, ezokuthutha, amandla, usimende, izimayini, amakhemikhali nezinye izimboni zezinto ezichotshozwayo eziphakathi nendawo, ubukhulu bokukhishwa bungashintshwa, […]
Indlela yokulinganisa ukusebenza kwe-pellet yomshini we-briquette? Indlela yokulinganisa izakhiwo ze-briquette
Ukukhiqizwa kwezimboni eziningi kudinga amalahle avuthayo ukuze kutholwe indawo yokukhiqiza enezinga eliphezulu lokushisa. Ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kokuvutha kwamalahle, i-briquette isetshenziswa ngokuyisisekelo. I-briquette ingahlangabezana kangcono nezidingo zokukhiqizwa kwezimboni ngokwamandla nokuqina. Kodwa akuwona wonke ama-pellets e-briquette acindezelwe umshini we-briquetting angahlangabezana nezidingo, futhi ukusebenza kwawo kuguqulwa kalula ngokulungiswa kwemingcele yemishini. Indlela yokulinganisa ukusebenza komshini we-briquette? 1. Isimiso sokwenza […]
Yiziphi izinkinga ezidinga ukunakwa ehlobo lemishini ye-briquetting machine?
Ngenxa yokuthi indawo yokusebenza yomshini wokucindezela ibhola inokhahlo futhi amandla okusebenza aphakeme kakhulu, ukugcinwa nokuhlolwa kuyadingeka kakhulu ohlelweni lokusebenzisa nsuku zonke, ikakhulukazi manje njengoba izinga lokushisa likhuphuka kancane kancane, ukunakwa okwengeziwe kufanele kukhokhwe, ngakho-ke ukucindezela ibhola. izinto zokusebenza zidinga ukunakwa ehlobo .Ziyini izinkinga? Izinkinga ezidinga ukunakwa ehlobo lemishini yomshini we-briquetting 1. Vimbela izinga lokushisa eliphezulu […]
I-high pressure roller mill roller assembly kanye nezinyathelo zokufaka imikhono yerola
Njengomshini omkhulu wokuchoboza, isigayo se-high-pressure roller sivame ukufakwa esizeni ngemva kokuba izingxenye zihlangene endaweni yokusebenzela. I-roller, njengengxenye eyinhloko yokuchotshozwa kwe-high-pressure roller mill, inezidingo eziqinile mayelana nokuhlanganisa nokufaka. , Abakhiqizi bemishini ye-briquetting abalandelayo bahlele izinyathelo zokufaka ama-roller omshini wokucindezela ophezulu kanye nemikhono ye-roller ukuze uthole inkomba yakho. Ukuhlanganiswa kwama-roller mill roller anengcindezi ephezulu Ukuhlanganiswa nokufakwa kwama-roller […]
Thola I-Quote Yamahhala
Sizolwela ukubambisana ngobuqotho futhi senze inqubekelaphambili kanye nawo wonke amaklayenti njengoba nje kwakunjalo esikhathini esidlule.
Umshini Wokugcwalisa Umfutho Ophakeme
Umshini Wokuhlola Ibriquette
Ama-High-Pressure Grinding Rolls
I-Screening Type Double Teeth-Roller Crusher
Four I-Teeth-Roller Crusher
Isando Somphumela Obuyiselwayo I-Crusher
Vertical I-Shaft Hammer Crusher
Inhlanganisela Eqhubekayo Evundlile Eqinile
Cylindrical Mixer< /a>
Engeza: I-Luoxin Industrial Zone, i-LuoyangCity, iSifundazwe sase-Henan P.R.C.